Fakana tanin’ny oniversite : nandoro kodiarana ny mpianatra | NewsMada
Fakana tanin’ny oniversite : nandoro kodiarana ny mpianatra
Nibahana ny arabe ary nandoro kodiarana ny mpianatra mipetraka eny amin’ny Cité an’ny oniversite omaly hariva, nanomboka tamin’ny 6 ora teo, teny Ambohipo. Tapaka tanteraka ny arabe ary sahirana ny olona teny an-toerana. Tonga teny Ankatso sy Ambohipo ny Emmo/Reg nandrava ireo mpianatra. Nirefotra mihitsy ny grenady mandatsa-dranomaso tamin’izany.
Araka ny fanazavan’ireo mpianatra, mitaky ny hamerenana ny tanin’ny oniversite alain’ny olon-tsotra izy ireo. “Misy manangana trano anatin’ny faritra misy anay. Ny anay aza efa tsy ampy kanefa lasan’olona, tsy mety izany, ny rano, sns”, hoy ireo mpianatra.
Nitondra fanazavana ny talen’ny Croua, Randriamiarinarivo Abel, fa efa any amin’ny fitsarana ny raharaha. “Mitaky amin’ny fitsarana izahay mba hamoaka haingana ny taratasin’io tany io ary hamerina izany amin’ny oniversite. Tsy vahaolana ho an’ny mpianatra ny mikorontana fa tokony hahandry ny fitsarana izy ireo”, hoy izy. Araka ny fanazavany ihany fa efa nisy ny didy fanohanana an’ilay olona manorina trano ary efa tonga teny an-toerana ny tale kabinetran’ny minisiteran’ny fampianarana ambony, ny vadintany efa indroa nandrara ilay olona, saingy nanohy hatrany izy. Niafara tamin’izao korontana izao ny raharaha.